किन सँगै हिँड्दैनन् निखिल र संचिता ? यस्तो छ कारण - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
किन सँगै हिँड्दैनन् निखिल र संचिता ? यस्तो छ कारण
१छ पुष,२०७३ | For see network
एउटै क्षेत्रमा सक्रिय भएर पनि अभिनेता निखिल उप्रेती र संचिता लुईँटेल प्राय कार्यक्रमहरुमा एक्ला एक्लै जाने गर्छन् । उनीहरुलाई एक साथ नदेख्दा मिडियाकर्मीहरुले किन एक साथ नआउनु भएको ? तपाईँहरुको सम्बन्धमा फाटो आएको हो ? भनेर सोझै प्रश्न गर्थे । पछिल्लो समयमा निर्देशक बनेका निखिलले संचितालाई आफ्नो फिल्ममा नलिएका कारण पनि उनीहरुको सम्बन्ध बिग्रिएको होकी भन्ने अड्कल धेरैले काटेका थिए । तर यसपाली दुवईमा सम्पन्न नवौँ नेफ्टा अवार्डमा निखिल र संचिता एक साथ देखिए । निखिलसँगै स्टेजमा पुगेकी संचिताले निखिलाई मिडियाले आफूलाई सोधेका सबै प्रश्नहरुको जवाफ दिन लगाईन् ।
उनले सबै मिडियाकर्मी र सिनेकर्मीहरुका अगाडि नै यी प्रश्नहरुको जवाफ दिनु पर्ने भनेपछि, यसको जवाफमा निखिलले हरेक कुराको सहि समय हुने बताए । उनले जहाँ पायो त्यहिँ एक साथ जानु भन्दा कुनै बिशेष ठाउँमा एक साथ जानुको मजा बेग्लै हुने पनि स्पष्ट पारे । यी सबै प्रश्नको जवाफ पछि संचिताले निखिललाई स्टेजमै आई लभ यु भन्न पनि लगाएकी थिईन् ।
निखिलले पहिलो श्रीमती र छोराछोरी हुँदा हुँदै संचितालाई भगाएर मुम्बई पुगेका थिए । निखिल र संचिता दुबैको यो दोस्रो विवाह हो । हाल यो जोडी दुई सन्तानको अभिभावक बनिसकेको छ । निखिल अहिले दुबै श्रीमतीलाई मिलाएर राख्ने कोसीसमा छन् ।